Kuzivisa | Martech Zone
Martech Zone iri blog rakagadzirwa na Douglas Karr uye inotsigirwa nevatsigiri vedu. Kune mibvunzo nezve iyi blog, ndapota taura nesu.
Iyi blog inogamuchira mafomu ekushambadzira kwemari, kutsigira, kubhadharwa mari kana dzimwe nzira dzekubhadhara.
Iyi blog inoita mari yehumwe hukama hwayo.
Iyi blog inogara neshoko remuromo kushambadzira zviyero. Isu tinotenda mukuvimbika kwehukama, maonero uye kuzivikanwa. Iyo muripo unogashirwa unogona kukanganisa izvo zvemukati zvekushambadzira, misoro kana zvinyorwa zvakagadzirwa mune ino blog. Izvo zvirimo, kushambadzira nzvimbo kana posvo zvichave pachena kuzivikanwa sekubhadharwa kana kutsigirwa zvemukati.
Varidzi (s) veiyi blog vanobhadharwa kuti vape maonero pazvigadzirwa, masevhisi, mawebhusaiti uye nezvimwe zvakasiyana misoro. Kunyangwe hazvo muridzi (s) weblog rino achigamuchira muripo weposvo kana kushambadza, isu tinogara tichipa maonero edu akatendeseka, zviwanikwa, zvitendero, kana zviitiko pane izvo zvinyorwa kana zvigadzirwa. Maonero uye maonero anoratidzwa pane ino blog ndeye chete iwo mabloggi. Chero chigadzirwa chigadzirwa, nhamba, makotesheni kana kumiririrwa pamusoro pechigadzirwa kana sevhisi inofanirwa kusimbiswa nemugadziri, mupi kana bato riri kutaurwa.
Iyi blog ine zvemukati zvinogona kuunza kupokana kwekufarira. Izvi zvirimo zvichagara zvichionekwa.